Mogadishu Journal » 2019 » September » 14
Mjournal :-War Murtiyeed ayaa laga soo saaray Shirka Wasiiradda maaliyadda Soomaaliya ee ka socday Magaalada Addis sababa ee xarunta dalka Itoobiya. Shirkaan ayaa waxaa ka qeyb galay Gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhanka Maaliyadda Ibraahim Dheere, Wasiirka Maaliyadda...
The airport under construction as part of the UAE military base in Berbera will now be converted for civilian use, Somaliland president Muse Bihi has said. Speaking upon return from the neighbouring Djibouti, Bihi told journalists the construction of the airport will from next...
Mjournal :-Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ku dhawaaqay inay joojiyaan Saldhiggii Imaaraadka Carabta ka dhisanayeen garoonka diyaaradaha Berbera, isagoo xusay inuu noqon doono mid rayid ah oo wixii hadda ka dambeeya uu noqon doono garoon weyn. Muuse Biixi...
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa goor dhow gaaray magaalada Marka ee xarunta u ah Gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen Mas’uuliyiin iyo bulshada magaalada. Ra’iisul Wasaaraha ayaa markii uu gaaray Marka waxaa uu meel fagaare ah...
Mjournal :-Madaxweynaha Dowladda Hirshabele Maxamed Cabdi Waare ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Guddoomiye ku xigeenka Maaliyadda Gobolka Shabeellaha Dhexe C/llaahi Shitaawe, Wasiirkii hore ee Ganacsiga Hirshabeelle Sabriye Cusmaan, iyo Ciidamadii la socday, kuwaas oo ay...
Mjournal :Dowladda Sacuudiga ayaa xaqiijisay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Drones-ka ay weerareen oo dab qabad siiyeen laba wershadood oo kuwa shidaalka ah oo ay leedahay shirkadda dawladda ee Aramco. Dowladda waxa ay sheegtay in Weerarada lagu egeeyay wershadda...
Mjournal :-Sadex ruux oo ka mid ahaa Mas’uuliyiinta la shaqeeya maamulka degmada Baledxaawo ee gobolka Gedo ayaa xalay Kooxo hubeysan waxaa ay ku dileen Magaaladaasi sidda ay xaqiijiyeen maamulka degmada. Dadka la dilay ayaa kala ahaa Cabdi Cali Kaynaan oo qaabilsanaa waaxda...
Mjournal :-Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qaraxa Saaka Kolonyo ay la socdeen Mas’uuliyiin ka tirsan Shabeellaha Dhexe lagula eegtay duleedka Magaalada Balcad xilli ay kusii jeedeen Magaalada Jowhar. Afar ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen Qaraxa oo ahaa Miinadda...
Mjournal :-Maamulka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay Kooxo hubeysan oo xalay Magaalada Kismaayo ku dhaawacay Mid ka mid ah waxgaradka sidda weyn looga yaqaano degaanada maamulka Jubbaland. Afhayeenka Laamaha Amniga Jubbaland ayaa sheegay in Ciidanka Ammaanka Jubbaland ay...
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in iska horimaad u dhaxeeyay Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya uu ka dhacay Magaalada. Ciidanka ayaa Saaka xilli hore ku dagaallamay meel u dhow Garoonka...
Mjournal :-Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay raadineyso heshiis ka baxsan maxkamadda Caalamiga ah ICJ ee Muranka badda Soomaaliya iyo Kenya usbuuc ka dib markii maxkamadda cadaaladda ee Qaramada Midoobay ay ogolaatay codsigeedii ahaa in dib loo dhigo kiiska. Dowladda Kenya waxa...